Chinese President Committed to Growing Zimbabwe Ties
Tomorrow, the country will mark its Independence Anniversary under the theme “Together growing our economy for a prosperous, resilient and inclusive society”.
In this pursuit, which is part of the national Vision to become an upper middle class economy the Chinese President said his country is committed to walking the journey with Zimbabwe.
“On this occasion I wish your great nation lasting peace and prosperity and the people of Zimbabwe happiness and good health”.
The country is currently in its second phase of the mass vaccination programme which is targeting teachers, the clergy, members of the security sector, the elderly and people with chronic conditions, among other priority groups.
President Mnangagwa has assured the nation that every Zimbabwean eligible for the vaccination will get the jabs free of charge.
Zimbabwe is seeking to vaccinate 60 percent of the country’s population to achieve herd immunity.
On February 18 Zimbabwe launched the first phase of its vaccination drive after receiving its first batch of Sinopharm vaccines that were gifted by China.